Baby Elfie Drone or Second Generation selife drone with G-sensor control – Rocket Online Shopping
Baby Elfie Drone or Second Generation selife drone with G-sensor control
Home ShopBabyBaby Elfie Drone or Second Generation selife drone with G-sensor control
Baby Elfie Drone or Second Generation selife drone with G-sensor control quantity
Categories: Baby, Technology, Travel.	Tags: Drone, elfie, JJRC, ဒရံုး.
Second Generation selife drone with G-sensor control
Selfie drone Second Generation ထပျထှကျလာပါတယျ ။ အသုံးပွုရလှယျကူ အောငျ Remote control လေးပါဝငျပွီး အရငျ အရှယျအစားထကျ ပိုသေးငယျပွီး ညအမှောငျမှာ မီးရောငျ အားကောငျးအောငျ မီးလုံးလေးတှေ ပွနျလညျ ပွငျဆငျထားပါသေးတယျ ။
Remote Control အနနေဲ့ G -Sensor ( control စောငျးရငျ လိုကျစောငျးပါတယျ ၊ဘေး ယိုငျရငျ လိုျကျရိုငျပါတယျ ) ထည့ျသှငျးထားတဲ့အတှကျ ကိုယျလကျ မှာ ခလုပျမနိုပျဘဲ လကျလှုပျရှားမူ့အတှကျ လိုကျ ပွီး drone က လှုပျရှားပေးပါတယျ ။ Car black box တှေ မှာပါတဲ့ G – Sensor ကို ထည့ျသှငးျထားပေးဒါပါ။
Wateroof case ပါ ပါဝငျတဲ့အတှကျ လူကွို့ကျမြားမှာအမှနျပါဘဲ
လကျဖဝါး အရှယျအစားတောငျမရှိတဲ့ ဆိုကျလေးဖွဈတဲ့အပွငျ သပျရပျတဲ့ ဘူးခှံနဲ့ ဘယျသှားသှား သယျဆောငျသှားလို့ရအောငျ လကျပတျ အိပျလေးတဈလုံးပါဝငျပါတယျ ။
အိပျလေးကလဲ အကောငျးဆုံး ဖွဈတဲ့အပွငျ အရငျ Selfie Drone ထပျကို ပိုမိုကောငျးမှနျအောငျ ပွငျဆငျထားဒါကိုတှေ့ရပါတယျ ။
IOS နဲ့ မောငျးမောငျး Android နဲ့မောငျးမောငျးအရမျးအဆငျပွဒေါကွောင့ျ ခရီးထှကျလို့ Selife ရိုကျမယျဆိုရငျ 1080P ရုပျထှကျကွညျတဲ့ Photo နဲ့ Video ရမှာအမှနျပါဘဲ ….
ဘယျကိုသှားသှား အိပျထဲသယျဆောငျရလှယျကူသလို Phone နဲ့ မောငျးမောငျး Remote Control နဲ့ မောငျးမောငးျအရမျးအဆငျပွဒေါကွောင့ျ တကယျ ကွို့ကျကွမှာတော့ အမှနျပါဘဲ
Phone နဲ့ မောငျးနငျမယျဆိုရငျ Phone motion နဲ့ပါမောငျးလို့ရတဲ့အတှကျ တကယျကို အဆငျပွေ ပါတယျ ။ လမျးကွောငျးပေး မောငျးဒါက အစ အဆငျပွတေဲ့ အပွငျ လထေဲရပျတပျထားဖို့ ပါပါဝငျပါတယျ ။
အရေးပေါျ ဆငျးဖို့ခလုပျအပွငျ Auto မောငျးနှငျဖို့လဲပါဝငျပါသေးတယျ ။
JJRC H37 Mini BABY ELFIE Specifications
ဒါကွောင့ျ နောကျဆုံးထှကျ Second Generation selfie drone လေးကို ဝယျဖို့မမေ့ကွဖို့ အကွံပေးပါရစေ ။
– (၁) လိုခငြျတဲ့ ပစ်စညျး
– (၂) နာမညျ
– (၃) ဖုနးျနံပါတျ
– (၄) လိပျစာ
အပွည့ျအစုံကို Chat Box (သို့) Viber (09264686461)
စြေးနှုနျး – 85000 kyats
Delivery free in Yangon (ရနျကုနျမွို.တှငျး ၆မွို.နယျသာ)
ဝယျယူဖွဈတယျဆိုရငျ ရနျကုနျမွို.တှငျး ပို.ခကို ပေးစရာမလိုပါ
⏰Open Time-9am To 5pm(ဆိုငျပိတိခြိနျတှငျ ဖုနျးမြားလဲပိတျထားပါသညျ။)
Sunday နဲ. အစိုးရ ရုံးပိတျရကျမြား ပိတျသညျ။
ရနျကုနျမွို.ပွငျ = ၂ထောငျကပြျ
နေ.ခငြျးအမွနျ = ၂ထောငျကပြျ
Order form ဖွည့ျပွီးလညျး မှာနိုငျပါတယျ။
အမှတျ ၁၃၂၊ ၄လှှာ B၊ ဗဟိုလမျး၊ ကမာရှတျမွို.နယျ။
ကွိုကျနှဈသကျသည့ျ Social Media တဈခုခုကို အသုံးပွု၍ Rocket တှငျ Order တငျနိုငျပါပွီ။
09264686461 ကို သူငယျခငြျးအဖွင့ျ contact တှငျ save ထားလိုကျပါ။
Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မွနျမာ)
ဒုံးပြံကဲ့သို့ အရှိနျနဲ့ လူကွီးမငျးတို့ အိမျအရောကျ ပို့ဆောငျပေးမယ့ျ
Selfie drone Second Generation ထပ်ထွက်လာပါတယ် ။ အသုံးပြုရလွယ်ကူ အောင် Remote control လေးပါဝင်ပြီး အရင် အရွယ်အစားထက် ပိုသေးငယ်ပြီး ညအမှောင်မှာ မီးရောင် အားကောင်းအောင် မီးလုံးလေးတွေ ပြန်လည် ပြင်ဆင်ထားပါသေးတယ် ။
Remote Control အနေနဲ့ G -Sensor ( control စောင်းရင် လိုက်စောင်းပါတယ် ၊ဘေး ယိုင်ရင် လိုက်ရိုင်ပါတယ် ) ထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက် ကိုယ်လက် မှာ ခလုပ်မနိုပ်ဘဲ လက်လှုပ်ရှားမူ့အတွက် လိုက် ပြီး drone က လှုပ်ရှားပေးပါတယ် ။ Car black box တွေ မှာပါတဲ့ G – Sensor ကို ထည့်သွင်းထားပေးဒါပါ။
Wateroof case ပါ ပါဝင်တဲ့အတွက် လူကြို့က်များမှာအမှန်ပါဘဲ
လက်ဖဝါး အရွယ်အစားတောင်မရှိတဲ့ ဆိုက်လေးဖြစ်တဲ့အပြင် သပ်ရပ်တဲ့ ဘူးခွံနဲ့ ဘယ်သွားသွား သယ်ဆောင်သွားလို့ရအောင် လက်ပတ် အိပ်လေးတစ်လုံးပါဝင်ပါတယ် ။
အိပ်လေးကလဲ အကောင်းဆုံး ဖြစ်တဲ့အပြင် အရင် Selfie Drone ထပ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြင်ဆင်ထားဒါကိုတွေ့ရပါတယ် ။
IOS နဲ့ မောင်းမောင်း Android နဲ့မောင်းမောင်းအရမ်းအဆင်ပြေဒါကြောင့် ခရီးထွက်လို့ Selife ရိုက်မယ်ဆိုရင် 1080P ရုပ်ထွက်ကြည်တဲ့ Photo နဲ့ Video ရမှာအမှန်ပါဘဲ ….
ဘယ်ကိုသွားသွား အိပ်ထဲသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသလို Phone နဲ့ မောင်းမောင်း Remote Control နဲ့ မောင်းမောင်းအရမ်းအဆင်ပြေဒါကြောင့် တကယ် ကြို့က်ကြမှာတော့ အမှန်ပါဘဲ
Phone နဲ့ မောင်းနင်မယ်ဆိုရင် Phone motion နဲ့ပါမောင်းလို့ရတဲ့အတွက် တကယ်ကို အဆင်ပြေ ပါတယ် ။ လမ်းကြောင်းပေး မောင်းဒါက အစ အဆင်ပြေတဲ့ အပြင် လေထဲရပ်တပ်ထားဖို့ ပါပါဝင်ပါတယ် ။
အရေးပေါ် ဆင်းဖို့ခလုပ်အပြင် Auto မောင်းနှင်ဖို့လဲပါဝင်ပါသေးတယ် ။
ဒါကြောင့် နောက်ဆုံးထွက် Second Generation selfie drone လေးကို ဝယ်ဖို့မမေ့ကြဖို့ အကြံပေးပါရစေ ။
– (၁) လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်း
– (၂) နာမည်
– (၃) ဖုန်းနံပါတ်
– (၄) လိပ်စာ
အပြည့်အစုံကို Chat Box (သို့) Viber (09264686461)
ဈေးနှုန်း – 85000 kyats
Order form ဖြည့်ပြီးလည်း မှာနိုင်ပါတယ်။
ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။
09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။
ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့်
Be the first to review “Baby Elfie Drone or Second Generation selife drone with G-sensor control” Cancel reply
Stress Doll or Egg Doll
Baby, Exercise, Women
Baby GPS Watch(ကလေးGPSနာရီ)
Baby, Spy, Technology, watch
GPS for baby or Q90 gps watch
Snoring Stopper Air Filter – nose snoring clip
Baby, Clean, Health
Small Movie Stand Ks15,000.00 Ks8,000.00
Neck Massager - Neck Massage Cushion Ks20,000.00 Ks16,000.00
night view glass Ks12,000.00 Ks8,000.00